Lasa izay ny 6 volana latsaka kely nandraisan’ny filoha Rajoelina ny fitantanana an’i Madagasikara saingy mbola hita ho mifantoka amin’ny fitohizan’asam-panjakana sy ny fitokanana ny vitan’ny mpitondra teo aloha no tena mibahana ny fandaharam-potoanan’ny fitondrana ankehitriny. Fisandratana hafa mihitsy no tonga ary na dia atao tokoa aza ny tsy hampifangaro ny raharaha politika amin’ny baolina kitra dia tsy misy hahafaha-milaza ny zava-misy mety indrindra ankoatry ny fehezanteny hoe « Nahazo ny fisandratany ny baolina kitra malagasy. Ny tompondakan’i afrika anefa mandalo, hoy ny teknisianina iray izay. Mba manao ahoana kosa ary ny mikasika izay fisandratan’i Madagasikara izay, indrindra, ireto vahoaka ao aminy efa misy mitaraina ho maty noana sy sahiran-dava ireto ? Toa na ny fahafaha-mampidina ny vidin-tsolika hifanaraka amin’ny vidiny tena izy aza nanahirana ny fitondrana ny nifampiraharaha momba azy kanefa dia ny filoham-pirenena mihitsy no nandresy lahatra ireo mpandraharaha momba izany nandritry ny 3 andro be izao. Hita ho mitady hiverina sahady indray koa ny fahiny raha nahita ny fihetsik’ireo depiote mahaleotena sasany iny omaly iny.